Yaa Ka Dambeyey Qaraxii lala eegtay Ciidamadda ka tirsan AMISOM
By WARIYAHA CAALAMKA On Sep 8, 2019 Last updated Sep 8, 2019
Sawirka Keydka Axadle
Wararka laga helayo Gobolka Shabeellaha dhexe. Ayaa waxaa ay sheegayaan in degaanka Buurane Maanta. Qaraxyo khasaaro geystay lagula eegtay Ciidamo ka tirsan kuwa Midowga Afrika ee AMISOM.
Qaraxaas oo ahaa. Miinada noocad dhulka lagu Aaso. Sida Ay goobjoogayaal noo sheegeen. Miinadda waxaa lagu aasay meel u dhow. Saldhiga ay ku lahayeen deegaanka Buurane ee degmada Mahadaay. Isla markaana qaraxyada oo laba ahaa ay ku geeriyoodeen Afar Askari oo ka tirsan Ciidamada AMISOM.
Wararka ayaa waxaa ay intaasi ku darayaan. In qaraxa koowaad kadib Ciidamo gurmad ahaa lala eegtay ay la kulmeen qarax kale. kaas oo geystay khasaaraha ugu badan ee gaaray Ciidamada AMISOM.
Qof ka mid ah dadka ku nool deegaanka Buurane. Ayaa Saxafadda u sheegay in qaraxa kadib Ciidamada AMISOM ay sameeyeen howlgallo. isla markaana ay xir xireen dhalinyaro ka mid aheyd dadka deegaanka.
Majirto cid sheegatay mas’uuliyada qaraxyada Maanta deegaanka Buurane lagula eegtay Ciidamo ka tirsan kuwa AMISOM,hayeeshee qaraxyada noocaas oo kale ah ayaa waxaa inta badan mas’uuliyadooda sheegta Ururka Al-Shabaab.